Hindiitti lakkoofsi namoota sababa gamoon jigeetiin du'anii 21 gahe - BBC News Afaan Oromoo
Hindiitti lakkoofsi namoota sababa gamoon jigeetiin du'anii 21 gahe
Goodayyaa suuraa Umuriin gamoo kanaa naannoo waggaa 100 ta'a
Magaalaa guddittii Hindii Mumbaayitti jiguu gamoo qaqabeen yoo xinnaate namoonni 21 kan du'an yoo namoonni 21 ammoo jijjigaa jalaa baasuun danda'amusaa barameera. Hojattoonni lubbu baraartootaas alkan guutuu namoota hafa barbaacha kan itti fufan ta'u, maddi poolisiin Mumbaay beksiiseera.
Gamoon abbaa darbii jahaa Magaalaa daldalaa kan taate Mombaayittis kan jigee har'a guyaa Kamisaa ganama keesaa sa'aatii 12: 10 irratti ture.
Gamoon kunis ganda namoonni baayyeen keessa jiraatu Behaandii Baazaaritti kan argamu yoo ta'u, umuriin isaas gara waggaa 100tti heerregama.
Yeroo ammaattis, ambuulaansoonni, konkoolattonni farra abiiddaa fi hojjettoonni gargaarsa yeroo balaa bakkichatti hojachaa jiru. Magaalaan Mumbaayis yeroo ammaatti rakkoo rooba cimaa fi lolaa irra bayyanachu irratti argamti.
''Namoonni 40 ta'an jijjiga jalatti argamanii jiru jedhame kan amaname yoo ta'u, Namoonni 24 lubbuun bafamanii jiru. Humna Baraartu Balaa Biyyaalessa Hinditii miseensoonni isaa 43 hojii irratti akka argaman, AFPtti himeera.
Biyya Hindii keessatti balaan jijjiga gamoo kunis ji'a sadii dagiitti yeroo sadaffaa qaabusaati. Maddiwwan polisiis, balaan kunis roba Kibxata tareetiin kan uumame ta'u akka hinollee eeree jira.
Goodayyaa suuraa Ambulaansii fi konkolaatota abidda dhamsan dabalatee namoota baay'eetu hojii baraarri kana irratti qooda fudhate
Dhiyeesitiin manneen gaarii waan baayyinaan hinjiraaneef, carraan namoonni qaban isuma sadarkaan isaanii gadaanaa ta'an irratti baayyatanii juraachuudha.
Kana irra kan ka'e biyya Hindii keessatti jijjiga gamootiin namoonni heddu lubuu isaanii dhabu.
Goodayyaa suuraa Mumbaayi bakka gamoo itti jige
Ji'a darbe, Adoolessa 2017 keessatti qofa balaan jijjiga gamoo abbaa darbii afuriitiin namoonni 17 achuma Mubaayi naannawa Ghaatkoopaar tti lubbu isaanii dhabanii jiru.
'Wallaansi Kaansarii oonnee kiyya madeesseera garuu lubbuun hafeera'
Turtii baqannaa Hayilesillaaseefi yaadannoo Ingiliz